ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်း(၆)ချက် - For her Myanmar
သာလွန်တဲ့ဘဝဆီ တက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုတာ မရှိမဖြစ်ပဲပေါ့
အသက်မနုမရင့် (၂၀)ကျော်အပိုင်းအခြားလေးမှာ ကိုယ့်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခေါင်းခဲစိတ်ပူဖူးကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်လျှောက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကို ရှာမတွေ့သေးရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားမရဖြစ်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျ ဘာညာလည်း ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်စိတ်ချ စိတ်အေးသွားအောင် အနာဂတ်အတွက် ကြိုတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထဲမှာ ငွေထက်အရေးကြီးတာက အသိပညာဗဟုသုတပါ။ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့သူတွေကို လေ့လာလိုက်ရင် စာဖတ်ကြတာများပါတယ်။ စာဆိုတဲ့ထဲမှာ ကာတွန်း၊ ဝတ္ထု၊ ကဗျာ၊ အင်တာနက်ဆောင်းပါး အစုံပါတာပေါ့။ ပညာလိုအိုသည်မရှိဆိုသလို ယောင်းအသက်အရွယ် ဘယ်လောက်ပဲရှိနေပါစေ။ အခုကစပြီးစာဖတ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါ။ ၂နှစ်အတွင်း ယောင်းပြောင်းလဲသွားတာကို ကိုယ်တွေ့ခံစားရမှာပါ။
Related Article >>> ညဘက်တွေမှာ ဘာလို့ ခေါင်း ခဏခဏ ကိုက်ရတာလဲ?
တစ်ချိန်လုံး ကပ်စေးနည်းခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ငွေကိုစိစိစစ်စစ်သုံးခိုင်းတာပါ။ ကိုယ်ရတဲ့ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်လိုလုပ်ကုန်သွားမှန်းမသိတာမျိုး လူတိုင်းဖြစ်ဖူးကြပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့ဆိုရင် စာရင်းဇယားလေးနဲ့ တွက်ပြီး သုံးသင့်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက်ချွေတာသုံးပါ။ အနာဂတ်မှာ အသေးစားစီးပွားရေးလေးဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားရင် ဒီစုငွေတွေက ယောင်းကိုထောက်ပံ့ပေးမှာပါ။
အခုလိုအင်တာနက်ခေတ်မျိုးမှာ ဘယ်ပညာမဆို လေ့လာရလွယ်ကူပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့နယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လေ့လာစရာမှန်သမျှကို အွန်လိုင်းကလေ့လာပါ။ အမှန်တကယ်အသုံးချမယ်၊ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်း အပြင်မှာသင်တန်းဖွင့်တဲ့အခါ တက်ရောက်သင်ယူပါ။ လေ့လာတာကို ဘယ်တော့မှ မရပ်လိုက်ပါနဲ့။
ကျန်းမာရေးကောင်းမှ အနာဂတ်ဆိုတာရှိတာပါ။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်ဖိစီးမှုတွင်းထဲ တွန်းမပို့ဘဲ အနားယူပါ။ အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး အနားယူတာမျိုး၊ ပိတ်ရက်တွေမှာ အပန်းဖြေခရီးထွက်တာမျိုး လုပ်ပေးပါ။ အသက်မရှိရင် အနာဂတ်မရှိဘူးလို့မှတ်ယူပြီး ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကိုယ် ဂရုစိုက်ပေးပါ။ စားချိန်၊ အိပ်ချိန်မှန်ပါစေ။ စိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ၊ တရားထိုင်ပါ။
Related Article >>> JENESYS (သို့ မဟုတ်) မြန်မာကျောင်းသားတိုင်း လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေး
ကိုယ်ဇောက်ချလုပ်မယ့်နယ်ပယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ထက်အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတဲ့ သူတွေဆီက အကြံဉာဏ်တောင်းပါ။ လိုအပ်တာရှိရင် သူတို့ဆီကလေ့လာပါ။ အဆင်ပြေရင်အလုပ်သင်သဘောမျိုး ဝင်လုပ်တာက ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
၆။ အချိန်ပိုလေးမှာ ဝင်ငွေရှာပါ။
ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာ ငွေမရှိရင်လည်း မဖြစ်သေးဘူးလေ။ တကယ်လို့ယောင်းက အားလပ်ချိန်အပိုတွေရှိတတ်ရင် အဲဒီအချိန်လေးတွေထဲက ဝင်ငွေရှာပါ။ ကိုယ်ကစာရေးတာဝါသနာပါရင် အလွတ်တမ်း ဆောင်းပါးရေးတာမျိုး၊ Handmade ဝါသနာပါရင် ဟန်းမိတ်ပစ္စည်းလေးတွေ လုပ်ရောင်းတာမျိုးလုပ်ပြီး အပိုဝင်ငွေရှာစုပါ။
၇။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင် စိတ်ဓာတ်က တက်လိုက်ကျလိုက် ဖြစ်နေမှာပါပဲ။ ကြိုးစားရင်အောင်မြင်မှာပဲဆိုပြီး ခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ထားပါ။ လဲကျလို့ပြန်မထဘူးဆိုရင် ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာပဲ ထိုင်နေရမှာပါ။
၈။ အလောတကြီး မလုပ်ပါနဲ့။
အလျင်စလိုဖြစ်ပြီး ပျာယာခတ်နေတာက ဘယ်သူ့ကိုမှစမတ်မဖြစ်စေပါဘူး။ အချိန်ယူပါ။ ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လျှောက်ရင် လဲကျဖို့ခက်တယ်ဆိုတာ စိတ်ထဲမှာမှတ်ပါ။
ယောင်းတို့ရေ..တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံဘယ်မရွေ့ဆိုသလို စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ကြိုးစားပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ အခုထက်သာတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို မလွဲမသွေ ရရှိနိုင်မှာပါနော်…
သာလှနျတဲ့ဘဝဆီ တကျလှမျးနိုငျဖို့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု ရှိထားသငျ့ပါတယျနျော
အသကျမနုမရငျ့ (၂၀)ကြျောအပိုငျးအခွားလေးမှာ ကိုယျ့ဘဝနဲ့ပတျသကျပွီး ခေါငျးခဲစိတျပူဖူးကွမှာပါ။ အထူးသဖွငျ့ ကိုယျလြှောကျရမယျ့လမျးကွောငျးကို ရှာမတှသေ့ေးရငျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျအားမရဖွဈပွီး စိတျဓာတျကြ ဘာညာလညျး ဖွဈလာတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အဲဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျစိတျခြ စိတျအေးသှားအောငျ အနာဂတျအတှကျ ကွိုတငျရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုလုပျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးကောငျးလေးတှကေို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတှထေဲမှာ ငှထေကျအရေးကွီးတာက အသိပညာဗဟုသုတပါ။ အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့သူတှကေို လလေ့ာလိုကျရငျ စာဖတျကွတာမြားပါတယျ။ စာဆိုတဲ့ထဲမှာ ကာတှနျး၊ ဝတ်ထု၊ ကဗြာ၊ အငျတာနကျဆောငျးပါး အစုံပါတာပေါ့။ ပညာလိုအိုသညျမရှိဆိုသလို ယောငျးအသကျအရှယျ ဘယျလောကျပဲရှိနပေါစေ။ အခုကစပွီးစာဖတျမယျလို့ ဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျပါ။ ၂နှဈအတှငျး ယောငျးပွောငျးလဲသှားတာကို ကိုယျတှခေံ့စားရမှာပါ။
Related Article >>> ညဘကျတှမှော ဘာလို့ ခေါငျး ခဏခဏ ကိုကျရတာလဲ?
တဈခြိနျလုံး ကပျစေးနညျးခိုငျးတာမြိုးမဟုတျဘဲ ငှကေိုစိစိစဈစဈသုံးခိုငျးတာပါ။ ကိုယျရတဲ့ပိုကျဆံတှေ ဘယျလိုလုပျကုနျသှားမှနျးမသိတာမြိုး လူတိုငျးဖွဈဖူးကွပါတယျ။ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးမဖွဈဖို့ဆိုရငျ စာရငျးဇယားလေးနဲ့ တှကျပွီး သုံးသငျ့ပါတယျ။ တတျနိုငျသလောကျခြှတောသုံးပါ။ အနာဂတျမှာ အသေးစားစီးပှားရေးလေးဖွဈဖွဈ လုပျဖို့ရညျမှနျးထားရငျ ဒီစုငှတှေကေ ယောငျးကိုထောကျပံ့ပေးမှာပါ။
အခုလိုအငျတာနကျခတျေမြိုးမှာ ဘယျပညာမဆို လလေ့ာရလှယျကူပါတယျ။ ကိုယျစိတျဝငျစားတဲ့နယျပယျနဲ့ပတျသကျတဲ့ လလေ့ာစရာမှနျသမြှကို အှနျလိုငျးကလလေ့ာပါ။ အမှနျတကယျအသုံးခမြယျ၊ စိတျဝငျစားတယျဆိုရငျလညျး အပွငျမှာသငျတနျးဖှငျ့တဲ့အခါ တကျရောကျသငျယူပါ။ လလေ့ာတာကို ဘယျတော့မှ မရပျလိုကျပါနဲ့။
ကနျြးမာရေးကောငျးမှ အနာဂတျဆိုတာရှိတာပါ။ အဲဒီတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ စိတျဖိစီးမှုတှငျးထဲ တှနျးမပို့ဘဲ အနားယူပါ။ အခြိနျတဈခုသတျမှတျပွီး အနားယူတာမြိုး၊ ပိတျရကျတှမှော အပနျးဖွခေရီးထှကျတာမြိုး လုပျပေးပါ။ အသကျမရှိရငျ အနာဂတျမရှိဘူးလို့မှတျယူပွီး ကိုယျ့ကနျြးမာရေးကိုယျ ဂရုစိုကျပေးပါ။ စားခြိနျ၊ အိပျခြိနျမှနျပါစေ။ စိတျရောကိုယျပါကနျြးမာဖို့အတှကျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပါ၊ တရားထိုငျပါ။
Related Article >>> JENESYS (သို့ မဟုတျ) မွနျမာကြောငျးသားတိုငျး လကျမလှတျသငျ့တဲ့ အခှငျ့အရေး
ကိုယျဇောကျခလြုပျမယျ့နယျပယျနဲ့ ပတျသကျပွီး ကိုယျ့ထကျအတှအေ့ကွုံအမြားကွီးရှိတဲ့ သူတှဆေီက အကွံဉာဏျတောငျးပါ။ လိုအပျတာရှိရငျ သူတို့ဆီကလလေ့ာပါ။ အဆငျပွရေငျအလုပျသငျသဘောမြိုး ဝငျလုပျတာက ပိုအဆငျပွပေါတယျ။
၆။ အခြိနျပိုလေးမှာ ဝငျငှရှောပါ။
ရငျနှီးမွှုပျနှံမှုဆိုတာ ငှမေရှိရငျလညျး မဖွဈသေးဘူးလေ။ တကယျလို့ယောငျးက အားလပျခြိနျအပိုတှရှေိတတျရငျ အဲဒီအခြိနျလေးတှထေဲက ဝငျငှရှောပါ။ ကိုယျကစာရေးတာဝါသနာပါရငျ အလှတျတမျး ဆောငျးပါးရေးတာမြိုး၊ Handmade ဝါသနာပါရငျ ဟနျးမိတျပစ်စညျးလေးတှေ လုပျရောငျးတာမြိုးလုပျပွီး အပိုဝငျငှရှောစုပါ။
၇။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုတညျဆောကျပါ။
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုမရှိဘူးဆိုရငျ စိတျဓာတျက တကျလိုကျကလြိုကျ ဖွဈနမှောပါပဲ။ ကွိုးစားရငျအောငျမွငျမှာပဲဆိုပွီး ခိုငျခိုငျမာမာယုံကွညျထားပါ။ လဲကလြို့ပွနျမထဘူးဆိုရငျ ပွုတျကခြဲ့တဲ့ လမျးဘေးတဈနရောမှာပဲ ထိုငျနရေမှာပါ။
၈။ အလောတကွီး မလုပျပါနဲ့။
အလငျြစလိုဖွဈပွီး ပြာယာခတျနတောက ဘယျသူ့ကိုမှစမတျမဖွဈစပေါဘူး။ အခြိနျယူပါ။ ဖွညျးဖွညျးနဲ့မှနျမှနျလြှောကျရငျ လဲကဖြို့ခကျတယျဆိုတာ စိတျထဲမှာမှတျပါ။
ယောငျးတို့ရေ..တဈနတေ့ဈလံ ပုဂံဘယျမရှဆေို့သလို စိတျဓာတျမကဘြဲ ဖွညျးဖွညျးနဲ့မှနျမှနျကွိုးစားပါ။ ဒါဆိုရငျတော့ အခုထကျသာတဲ့ အခွအေနတေဈခုကို မလှဲမသှေ ရရှိနိုငျမှာပါနျော…
Tags: invest, Knowledge, learning, money, reading, Save, Time